Etu esi hazi Epiphany na Fedora: GSettings, Flash na extensions | Site na Linux
Etu esi hazie Epiphany na Fedora: GSettings, Flash na extensions
Mụta ụfọdụ aghụghọ iji hazie ihe nchọgharị a magburu onwe ya ma melite ahụmịhe onye ọrụ, nke ga - enyere gị aka ịmara onwe gị na ngwa GSettings.
Echere m na na nke ọ bụla ọ nwere ike ịdị iche, mana na nke m, ebe m chọpụtara Epiphany (ihe nchọgharị gọọmentị nke GNOME), M na-amalite ịhapụ ezigbo Firefox m.
Amaara m na ọtụtụ n'ime unu agbahapụla ya ogologo oge gara aga chromium/Google Chrome, ma achọrọ m ọzọ nke na-anaghị eri RAM m niile ma achọta ya na gọọmentị Fedora, yana Ọ bụghị ikpe.
Mgbe m nwesịrị Epiphany enwere m obi ụtọ site na obere nchekwa ya (n'ọnọdụ m n'etiti 2 na 6 ugboro obere karịa Firefox 7), mana nke bụ eziokwu bụ na ọ naghị aba ezigbo uru na mbụ, yabụ ka anyị mụta otu esi ahazi ya.
Na nke a anyị ga-eji Fedora 15 64-bit.
2 Wụnye Flash
3 Iji ndọtị
Epiphany (opekata mpe ụdị nke 3) na-eji Ntọala ịzọpụta mwube gị. Ọ bụ oyi akwa abstraction maka nzube a, nke na GNU / Linux na-eji usoro ahụ okpokoro dị ka ụlọ nkwakọba ihe data dị ala.
Anyị nwere ike iji ihe ngosi ihe ngosi dconf. Anyị ga-ahụ igodo Epiphany na nhazi org.gnome.Epiar. Iji wụnye ya na Fedora:
sudo yum wụnye dconf-nchịkọta akụkọ
Maka ndị chọrọ iji ngwa ọrụ site na akara iwu, ịnwere ike ile anya enyemaka na iwu ndị a na-ahụkarị:
gsettings - enyemaka
Iji maa atụ, iji gakwuru igodo Epiphany niile anyị ga - eji:
Ugbu a, anyị ga-ahụ otu esi arụ ọrụ ụfọdụ nke yiri ka ọ bara uru:
gsettings set org.gnome.Epiphany n'etiti-pịa-emepe-emepe-url eziokwu
gsettings set org.gnome.Epiphany ohuru-windows-in-tabs ezi
gsettings set org.gnome.Epiphany.web enable-popups ụgha
gsettings setịpụrụ org.gnome.Epiphany.web min-font-size 10
Echere m na ha bụ nkọwa onwe onye mara mma ...
Anyị nwere Flash 11 na mkpofu anyị, nwere nkwado nke ndị obodo maka 64-bit GNU / Linux. Flash bụ teknụzụ nwere ikike nke anaghị amasị m nke ukwuu, mana ọ dị mwute ikwu taa ọ dị ezigbo mkpa ịnụ ụtọ weebụ.
M na-eji Ilo any Obere oge, ọ bịara doo m anya na o tozughi oke iji dochie Flash. Ma ọ dịkarịa ala, FSF achọpụtala ma nwee ya nnukwu mkpa software oru ngo.
Iji wụnye ya na Fedora anyị nwere ebe nchekwa Adobe. Anyị na-etinye ebe nchekwa a site na ịga flash wụnye peeji nke na ibudata ya na nhọrọ YUM maka Linux.
Site na nke a anyị na-ebudata ngwugwu RPM nke na-etinye nkwụnye ọkụ Flash. Anyị ga-etinye ngwungwu a wee tinye mgbakwunye:
sudo yum localinstall ~ / Downloads / adobe-hapụ-x86_64-1.0-1.noarch.rpm
sudo yum wụnye flash-ngwa mgbakwunye
N'ezie, anyị nwekwara ike iji ihe osise eserese ...
Agbanyeghị, nke a na awụnyere Flash na Firefox na ndị ọzọ, mana ọ bụghị Epiphany. Iji rụọ ọrụ ya, anyị ga-ekepụta ihe njikọta na ngwa mgbakwunye na ndekọ Epiphany:
Otu n’ime ihe njiri mara Firefox bụ ọba akwụkwọ sara mbara nke ndọtị ya. Epiphany adabaghị na ha, mana opekata mpe nwere ole na ole nke ahụ pụrụ ịdị nnọọ irè. Anyị na-etinye ha na:
sudo yum wụnye epiphany-extensions
Mgbe ahụ, anyị nwere ike hazie ha na menu Ngwaọrụ> Mgbatị nke Epiphany dere. Ndị nke kachasị baara m uru bụ:
Ndenye aha RSS
Kpọmkwem, Omume bara ezigbo uru. Zipu URL nke mmewere ị na-ahọpụta dị ka STDIN na mmemme ma ọ bụ edemede ị na-agwa ya. Dịka ọmụmaatụ, iji budata ọdịnaya na njikwa ihe nbudata Gwget. Nzọụkwụ ịgbaso:
Gbaa mbọ hụ na ị wụnyela Gwget.
sudo yum wụnye gwget
Na Epiphany, Dezie> Omume> Tinye.
Na windo ahụ, tinye aha na nkọwa nke na-akọwa ihe ahụ nke ọma, yana nye iwu naanị dee gwget.
Kanye akara na nhọrọ iji tinye n'ọrụ na onyonyo na ibe.
Ugbu a pịa aka nri na njikọ ọ bụla, ibe, ma ọ bụ ihe oyiyi ọ bụla. Ga-enwe nhọrọ ibudata na Gwget, ọ ga-eme.
Enwere ndọtị gọọmentị na ndokwa a na-akpọ ndọtị gwget-epiphanyma ha emebeghị ya dakọtara na Epiphany mbipute 3 ma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Etu esi hazie Epiphany na Fedora: GSettings, Flash na extensions
M nwere nsogbu nke peeji nke na-adịghị etinye a font ịke anya dị nnọọ njọ na-enweghị antialiasing na nnọọ obere.
Agbalịrị m ịtọ ntọala ndabara na gnome na site na gsettings mana ọ ka bụ otu: /
Ọ bụ Ernesto Acosta dijo
Ọmarịcha. In Debian Testing with version 3.0.x nke Proxy Proxy anaghị ejide m. Enwere aghụghọ maka nke ahụ?
Zaghachi Ernesto Acosta
Otu ihe ahụ abụghị otu usoro maka ezigbo Debian haha
Nnọọ, enwere m nsogbu nchọgharị a.E nwere m Fedora 18… Mana youtube anaghị arụ ọrụ .. m gbalịrị ihe niile .. m nwere adobe flash player arụnyere na ọ na-arụ ọrụ maka m na chrome na firefox.
Anyị abịaghachila n'ịntanetị ọzọ
Na ọnụ: Zoo faịlụ n'ime ọzọ